Mgbagwoju anya maka asambodo ọgwụ mgbochi na -egbochi mgbake njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Mgbagwoju anya maka asambodo ọgwụ mgbochi na -egbochi mgbake njem
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mgbagwoju anya maka asambodo ọgwụ mgbochi nwere ike igbochi mgbake njem
Enweghị ndekọ ndekọ digitalized na mba ụfọdụ, gụnyere US, na -eme ka ịnwapụta ọgwụ mgbochi ọrịa siri ike.
A na -eto ọgwụ mgbochi ọrịa dị ka onye na -enyere njem aka na ntakịrị olileanya maka ụlọ ọrụ ahụ.
Iwu ndị kewara ekewa na enweghị nkwekọrịta ibe na -egbochi njem.
Agagharịwo ndị njem mgbagwoju anya maka otu ha ga -esi nye ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ha.
Enweghị usoro asambodo ọgwụ mgbochi mba ụwa niile nwere ike igbochi mgbake njem ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị njem na -enwe mgbagwoju anya gbasara ihe mgbochi iche na mgbochi njem. Site na iwu dị iche iche, ụfọdụ nwere ike họrọ maka njem ụlọ, na -emetụta ebe ndị dabere na nleta mba ofesi.
A na -eto ọgwụ mgbochi ọrịa dị ka onye na -enyere njem aka na ntakịrị olileanya maka ụlọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, iwu kewara ekewa na enweghị nkwekọrịta ọ bụla na -aga n'ihu na -egbochi njem, mmachi njem bụ ihe mgbochi nke abụọ kachasị mkpa maka njem maka 55% nke ndị zara ajụjụ na ntuli aka ụlọ ọrụ na nso nso a.
Ndị njem na -enwe mgbagwoju anya maka otu ha ga -esi nye ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ha iwu dị iche iche n'ofe ebe. Maka ụfọdụ ebe, ndị njem kwesịrị ịwụpụ ọtụtụ hoops iji gosi ọkwa ha, ma ọ bụrụ na ha na -aga ọtụtụ mba, usoro a na -adịkarị iche. Agbanyeghị na ọ dị ka mmachibidola belatara, mgbagwoju anya nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga -aga n'ihu na -abụ ihe mgbochi.
Mba dị iche iche na -ekwupụta iwu dị iche iche iji gosi ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, site na akwụkwọ ruo ndekọ dijitalụ. Ndekọ dijitalụ adịghị mfe ịnweta na mba ụfọdụ, ọ ga -agbakwụnye ihe mgbagwoju anya maka ndị njem, nke nwere ike ime ka ha chegharịa atụmatụ ha.
Ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yiri ka ọ bụ echiche nke mwepụta ọgwụ mgbochi. Enweghị ndekọ ndekọ digitalized na mba ụfọdụ, gụnyere US, na -eme ka ịnwapụta ọgwụ mgbochi ọrịa siri ike. obodo ntàA na -eto njem njem njem dị ka ihe ngwọta ụlọ ọrụ mana nnabata ọ dara ogbenye, enwebeghịkwa njikọ gọọmentị. Site na ndị na -enye ọrụ ndị ọzọ na -abanye na oghere, o mepụtala usoro ekewara ekewa nke na -achọ ndị njem ka ha bulite ihe akaebe iji mepụta ikike dijitalụ. Ndị na -eme njem nwere ike jiri iwu dị mfe gakwuru ebe ha na -aga ma ọ bụ họrọ maka njem ụlọ n'ihi nke a na -eme ka ebe ndị ọbịa ghara ịdị.
Ndị njem chọrọ ngwọta dị mfe nke chọrọ obere mbọ. Industrylọ ọrụ ahụ ga -arụkọ ọrụ ọnụ iji jikọta ihe ngwọta na -arụ ọrụ maka ndị niile metụtara ụlọ ọrụ. Ruo oge ahụ, ụfọdụ ga -ezere njem n'ihi ọdịdị dị mgbagwoju anya nke igosipụta ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ọ gwụla ma ewepụtara usoro n'oge adịghị anya, ọ nwere ike belata arịrịọ mba ụwa n'ihi na iwu nwere ike sie ike nghọta na mgbake ebe nwere ike kwụsị n'ihi nke a.